गायिकाहरुलाई ‘डिभोर्स’को मार - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper गायिकाहरुलाई ‘डिभोर्स’को मार	गायिकाहरुलाई ‘डिभोर्स’को मार - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper गायिकाहरुलाई ‘डिभोर्स’को मार
गायिकाहरुलाई ‘डिभोर्स’को मार
प्रकाशित: २५ माघ २०७०, शनिबार
सफल सिने हिरोइनहरूमा देखिएको सम्बन्धविच्छेदको लहर गायिकाहरूमा सरेको छ। पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर एकल जीवन बिताउने र दोस्रो घरबारको चरणमा पुगेका गायिकाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। गायक क्षेत्रका जोडीहरूको ‘ब्रेक अप’ को अनुपात अन्य क्षेत्रका महिलाको भन्दा निकै बढी देखिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री कपिल दाहाल यसलाई नेपाली समाजमा सेक्स, विवाह र परिवारप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको संकेत मान्छन्। दाहाल भन्छन्, “पहिले सात जुनीको बन्धन मानिने विवाह अहिले एक जुनीको करारनामा पनि हुन छाडेको छ।”
कसैको घरजम, कोही एक्लो
तीन वर्षअघि संगीतकार मनोजराज सेवाबाट पारपाचुके लिएकी चर्चित गायिका अन्जु पन्त सहनुको सीमा सकिएपछि अलग्गिएको बताउँछिन् । सेलो र नेपाली गरी करीब चार हजार गीत गाएकी इन्दिरा गोले समाजमा प्रिय बन्दाबन्दै परिवारको अप्रिय बन्नुपरेको बताउँछिन्।
संगीतकर्मी यादेश लामासँगको विवाह कुनै समयकी लोकप्रिय गायिका सपनाश्रीका लागि पनि दुःखको कारण बन्यो। दुई छोरी जन्मेपछि ‘ब्रेक अप’ गरेकी उनी अहिले विमल बुढाथोकीसँग दोस्रो विवाह गरेर अमेरिकामा बसेकी छन्। यस्तै, पर्यटन व्यवसायी पवन गोयलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी लोकगायिका निशा सुनार नृत्यकलाकार शंकर विसीकी दोस्री पत्नी बनेकी छन्। एक दशकमा तेस्रो विवाह गरेकी नायिका–गायिका पूजा लामाले विराज लोप्चन र डिजे शिशिरसँग दुई पटक गरेको विवाह केवल नाटक सावित भयो। यसैगरी, चर्चित गायिका सुक्मित गुरुङ पनि अहिले तेस्रो घरजममा छिन्।
रेश्मा सुनुवार ।
गायिकाको रुपमा सफल हुँदै गर्दा देविका वन्दना र सत्यकला राईको पनि पहिलो घरबार बिग्रियो। पहिलो घरबार बिग्रिएका गायिकाको सूची निकै लामो छ। यीमध्ये धेरैले दोस्रो घरबार गरिसकेका छन् भने केहीले एकल जीवन बिताइरहेका छन्। दोस्रो बिहे गर्नेमा सत्यकला राई, सपनाश्री, पूजा लामा, निशा सुनार, बीमाकुमारी दुरा, देविका वन्दना, आशा लामा लगायतका गायिका छन् भने अन्जु पन्त, इन्दिरा गोले, झुमा लिम्बू, मल्लिका कार्की, रेश्मा सुनुवार, डोमा लामा, सोनिका लामा, पूजा गुरुङ, सुस्मिता कार्की आदि एकल जीवन बिताइरहेका छन्।
किन टुट्छ सम्बन्ध
नेपाली चलचित्र र गीत–संगीत क्षेत्र ‘डिभोर्स’ बाट प्रताडित देखिन्छ। हाँसो–मजाकमा देखिने धेरै नायिका/गायिका घाइते मुटु बोकेर हिंडिरहेका छन्। बनिबनाउ घरबार त बिग्रेको छ नै, उनीहरूका छोराछोरीले बाबुआमाको विछोडको असर भोगिरहेका छन्। अपवादलाई छाड्ने हो भने धेरैजसो बिगार पुरुषप्रधान सामाजिक सोचका कारण भएको छ। गायिका/नायिकाहरूको घरबार बिग्रनुमा मूल रुपमा समाजमा श्रीमतीको हाईहाई हुन थालेपछि यातनाको तहमा इर्ष्यापूर्ण व्यवहार गर्ने पुरुष मानसिकता नै कारक रहेको पाइन्छ।
गीतकार तथा वरिष्ठ निर्देशक यादव खरेल नेपाली महिलाको शिक्षा र आर्थिक स्तर उक्सिंदै गएपछि उनीहरूको वैवाहिक जीवन समस्याग्रस्त बनेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, शैक्षिक र आर्थिक हैसियत बनाएका महिलाहरू श्रीमान्ले जे–जे भन्यो त्यही–त्यही मात्र गरेर बसिरहन मान्दैनन् बरु आफैं गरेर खाने स्वतन्त्रता खोज्छन्। “समस्या यहींबाट शुरु हुन्छ”, निर्देशक खरेल भन्छन्, “द्वन्द्व बढ्दै जाँदा उनीहरू श्रीमान् छोड्न पनि डराउँदैनन्।”
मल्लिका कार्की ।
यद्यपि, यसमा आफू ‘सेलिब्रेटी’ भएपछि लोग्ने र परिवारलाई नगन्ने प्रवृत्तिलाई अपवाद मान्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ। किनभने, अधिकांश महिला कलाकार व्यावसायिक सफलताको चर्चासँगै विभिन्न दबाबमा पर्न थाल्छन्। उनीहरूका नाम कहिले कोसँग त कहिले कोसँग जोडेर विभिन्न हल्लाहरू चल्न थाल्छ। कतिपय वेला कार्यक्रमका लागि घर बाहिर रात बिताउनुपर्ने यो क्षेत्रका महिलाहरूलाई श्रीमान् वा परिवारले बुझ्न सकेन भने सम्बन्ध बिग्रने संगीतकार वसन्त सापकोटा बताउँछन्। “केहीको चाहिं चारित्रिक समस्याकै कारण वैवाहिक सम्बन्ध टुटेको हुन सक्छ”, सापकोटा भन्छन्।
त्रिविका मानवशास्त्री दाहाल बढी ‘फेसनेवल’ र लामो समयसम्म घर बाहिर रहने गायिका/नायिकाहरूको घरबार चाँडो धरापमा पर्ने बताउँछन्। ‘एक्स्पोजर’ पाएपछि श्रीमान् र परिवारका कुरालाई ध्यान नदिंदा सम्बन्ध बिग्रने बताउँदै दाहाल भन्छन्, “श्रीमान्ले श्रीमतीको पेशाको प्रकृति नबुझ्ने समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।” कतिपयले श्रीमान्को सहयोगमा ‘सेलिब्रेटी स्टाटस’ बनाएपछि दोस्रो बिहे गरेका छन् भने कोही इर्ष्यालु श्रीमान्ले सौता भित्र्याएपछि अलग भएका छन्। श्रीमान्ले कान्छी ल्याएपछि पारपाचुके गरेकी गायिका इन्दिरा गोले भन्छिन्, “एकातिर अनावश्यक शंका गर्ने, अर्कातिर आफैं कान्छी ल्याउने भएपछि सम्बन्धको लागि के नै बाँकी रहयो र!”
कहिल्यै नचिनेको केटा स्वीकार्ने केटीले त जुनीभरको लागि विवाह गरेकी हुन्छे भने कसैले प्रेमपछिको बिहे एक–दुई वर्ष सोचेर गरेको भन्ने हुँदैन। बाहिर कुरा काट्नेहरूले अनेक थोक भन्छन्, तर मेरो वैवाहिक जीवनको कथा दर्दनाक छ। जीवनका धेरै सुन्दर समय तनावमा बिते। लोग्नेले सधैं शंका गर्ने अनि रक्सी खाएर कुट्ने। यस्तो अत्याचार कति सहें, मलाई मात्र थाहा छ। मेरा आफन्तहरूकहाँ गएर मेरोबारे नानाभाँती कुरा गर्नेदेखि डेढ वर्षकी छोरीलाई मेरी हैन भन्नेसम्मका कुरा सहें। कुटेर अनुहारमा दागैदाग हुँदा ‘मास्क’ लगाएर हिंड्थें। अमेरिकाको कार्यक्रममा जाँदा त कुटेर हातको औंला नै भाँचिदिए। अहिले त्यो अत्याचार सम्झँदा कहाली लाग्छ।
मेरो जस्तै अरु धेरै गायिकाको घरबार बिग्रेको छ। कतिपय सम्बन्ध हल्लाखोरहरूले बिगारिदिएका छन्। कतिपय श्रीमान् पनि पीडित होलान्, तर धेरैजसो सम्बन्ध श्रीमतीको पेशाको प्रकृति नबुझ्ने अनि इर्ष्यालु लोग्नेको कारण बिग्रिएको छ। एउटै क्षेत्रको लोग्नेले त मेरो सफलता सहन सकेन भने फरक क्षेत्रका लोग्नेमान्छेलाई गायिका/नायिका श्रीमतीले पाएको वाहवाही बुझ्न गाह्रै पर्छ। पुरुषप्रधान समाजमा अगाडि आउन खोजेका धेरै महिला कलाकारको जीवनलाई बर्बाद पार्न खोजिएको छ।